Endolzansy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Indolzansy)
Ny endolzansy na indolzansa na indolzansy dia fanao ao amin'ny Fiangonana katolika romana izay mamela manontolo na ampahany eo anatrehan' Andriamanitra ny sazy (atao hoe "fivalozana") solon' ny fahotana efa nahazo famelana.
Eveka katôlika mizara "endolzansy manontolo" amin'ny olona mandritra ny fotoana mampisy loza lehibe. Sary nataon'i Lorenzo Lotto, Suardi, Italia, taona 1524.
Ny manampahefana ao amin' ny Fiangonana no manome ny endolzansy ary izany dia heverina fa endrika isehoan' ny fanelanelanana ny mpino amin' Andriamanitra, izay angatahin' ny Fiangonana iray manontolo amin' ny alalan' ny litorjia sy ny vavaka ataony, mba hampisy fampihavanana ny iray amin' nympino ao aminy izay mbola velona na efa maty.
Raha fanao matetika ny manome endolzansy tamin' ny andro fahiny dia mbola misy izany amin' izao fotoana izao na dia mahalana kokoa.
1 Tantaran' ny endolzansy
1.1 Fiantombohany sy fivoarany
1.2 Fanakiana ny fanao momba ny endolzansy
1.3 Fanamafisan' ny Katolika ny fizarana endolzansy
2 Ny endolzansy ankehitriny
2.1 Famaritana sy karazana
2.2 Ny fanao momba ny endolzansy ankehitriny
3 Ny vokatry ny endolzansy
Tantaran' ny endolzansyHanova
Ao amin' ny Fiangonana kristiana tamin' ny fotoana voalohany nampisy ny kristianisma dia nisy fanoneran-keloka hentitra izay nodidian' ny pretra na ny eveka tsy maintsy ataon' izay olona meloka noho ny fahotana lehibe nataony. Noheverina fa azon' ny olona nanota atao ny manonitra ny fahotany eto an-tany fa tsy any ankoatra ahafatesana, na dia amin' ny ampahany ihany aza.
Mba hanonerana ny fahotana dia nandidy ny mpanota hifady hanina, hanao fivahiniana masina, hikapo-tena sy hanao tsanganasa fivalozana hafa koa ny mpitondra fiangonana. Nihanisolo tsaganasa fivalozana malefaka, toy ny fanaovana vavaka maro sy ny fiantrana izany taty aoriana.
Tsy niraharaha ny amin' ny endolzansy ny teolojiana talohan' ny taonjato faha-12. Nisy ny nanohitra io fanao io tamin' ny voalohany, nefa tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-12 dia niova ka nanaiky ny fanaovana indolzansa ny teolojiana maro. Niaraka tamin' izany koa dia nihananjary fahefan' ny papa manokana ny endolzansy.
Fiantombohany sy fivoaranyHanova
Ny fanao momba ny endolzansy, izay nolovaina tamin' ny lalàna romana, dia efa nanomboka tany amin' ny taonjato faha-3. Izany dia natao mba hampidirana indray ao amin' ny fianakavian' ny fiangonana ireo Kristiana nivadi-pinoana nandritra ny fanenjehana tany aloha. Tamin' ny taonjato faha-12 dia voafaritra araka ny lalàna tao amin' ireo taratasy mirakitra ny didin' ny papa, atao amin'ny teny latina hoe litteræ decretales: nisy ny fanavahana mazava izay natao eo amin' ny absolosiona, izay fahefan' Andriamanitra, sy ny endolzansy, izay ahafaha-mihavana indray amin' ny Fiangonana. Ny endolzansy dia azo avy amin' ny fanaovana asa maneho fitiavam-bavaka (fivahiniana masina, vavaka, fampijalian-tena) atao hahazoana izany endolzansy izany ao sady amin' ny fibebahana -- miantefa amin' reo izay mivalo sy miaiky ny fahotany tokoa (latina: vere penitentibus et confessis, araka ny fiteny tamin' ny taonjato faha-12).
Ady tao Las Navas de Tolosa, tamin'ny 16 Jolay 1212, tamin'ny andron'ny Reconqiusta, sary nataon'i Francisco van Halen.
Ara-keviny dia tsy misy fifandanjana ny hadisoana sy ny tsanganasa fitiavam-bavaka: ny endolzansy dia atao hoe vokatry ny fiombonan' ny olo-masina. Raha ny fanao no jerena dia hafa ny zava-miseho, ka amin' ny ampahany dia akon' ny fanaon' ny vahoaka jermanika izany, izay manana lalàna misy fampifandraisana ny fanonerana ka mampisy sanda mifandanja amin' ny hadisoana. Ny endolzansy dia nalaina tahaka amin' ny boky avy any Irlandy izay mametra ny isan' ny andro anefan-tsazy araka ny karazana hadisoana. Ny endolzansy izay fohy kokoa raha mitaha amin' ny fivalozana ara-batana dia lasa nihanisolo ity farany, indrindra ho an' ny olona efa hofaty.
Ny antipapa Joany XXIII
Nanomboka tamin'i zany vanimpotoana izany dia efa hita ny fanararaotana, indrindra ny simonia: ny mpino dia miady varotra amin' ny pretra ny amin' ny asa fiantrana, izay matetika vidina vola. Ny konsily tamin' ny taonjato faha-10 sy faha-11 dia niezaka nametra ny anjara fanombanana ataon' ny pretra tamin' ny alalan' ny fatran' isa ankapobeny. Tamin' izany vanimpotoana izany dia nanjary fitaovam-piadiana ho an' ny papa ny endolzansy: ny endolzansy manontolo dia niseho teo antenantenan' ny taonjato faha-11; nampiasaina io karazany io mba hamporisihana ny tafiky ny hazo fijaliana (kroazada) tany Espaina, izany hoe tamin' ny Reconquista (fakàna ny saikanosy Iberika amin' ny Miozolmàna). Nandritra ny Andro Antenantenany dia tsy nitsaha-nihena ny sandan' ny endolzansy: nihakely hatrany ny ezaka ilaina hahazoana endolzansy izay nihalehibe hatrany. Natakalo vola koa ny fanafahana amin' ny asa tsy maintsy atao, ka ny vola voangona tamin' izany dia namatsiana ny tranom-pivavahana na nahafahan' ny mpitondra fiangonana ambony hiaina anaty harem-be. Ohatra, ny Tour de beurre ("Tilikambon-dobera") ao amin'ny katedraly Notre-Dame de Rouen ao Frantsa dia nahazo io anaram-botsotra io noho ny fivarotana ny famelana ny olona hihinana zava-matavy amin' ny fotoan' ny karemy.
Ny papa Siksto IV, sary nataon'i Tiziano Vecellio, taona 545-1546.
Tamin' ny fiantombohan' ny taonjato faha-15 dia niseho ny fanaovana raharaham-barotra ny endolzansy tamin' ny andron' ilay antipapa Joany XXIII. Izany fanararaotana izany dia notsikerain' i Jan Hus (1369-1415). Tamin' ny taona 1476 dia namoaka didy ny papa Siksto IV fa ny endolzansy dia azo vidina mba hampihena ny fotoana holanina ao amin' ny afo fandiovana. Araka izany dia izy no niandohan' ny fanaovana raharaham-barotra ny endolzansy tao amin' ny Fiangonana ao Roma.
Rehefa nandroso ny fanontana printy dia maro dia maro ny taratasin' endolzansy natonta: ny tao amin' ny tranon-jelijiozin' i Montserrat fotsiny dia nampanonta endolzansy miisa 200 000 teo anelanelan' ny taona 1498 sy 15000.
Fanakiana ny fanao momba ny endolzansyHanova
I Martin Lotera (1483-1546), sary nataon'i Lucas Cranach
Tamin' ny Andro Antenantenany dia lasa nisy ny fanararaotana momba ny fanomezana endolzansy. Ny nanaovana azy ho raharaham-barotra sy ny tsy fisian' ny fanapahan-kevitry ny olona hibebaka, tamin' ny taonjato faha-16, dia iray amin' ny zavatra nahatonga ny fisarahan' i Martin Lotera tamin' ny Fiangonana katolika romana, ka niteraka ny Reformasiona (na Fanitsiam-pivavanana) ny fivarotana endolzansy.
Isan' ireo fanararaotana anatiny tao amin' ny Fiangonana ny fanomezana endolzansy na an' iza na iza manampy amin' ny fanamboarana ny bazilika vaovao Saint-Pierre ka i Jolio II no nanome izany tamin' ny taona 1506, sady nohamafisin' ny papa nandimby azy Leo X. Izany fotoana izany koa no nisehoan' ny fahatafintohinana izay misy ifandraisany amin' ny zavatra nataon' ilay dominikana Johann Tetzel, niandraikitra ny fivarotana endolzansy tamin' ny taona 1516 sy 1517 amin' ny anaran' i Albrecht von Brandenburg (fratsay: Albert de Brandebourg) arsevekan' i Mainz (frantsay: Mayance), izay nazoto nanao izany fivarotana izany noho ny fanantenany hahazo ny 50%n' ny vola azo. Atao hoe izy no namorona ilay don-teny hoe: "Sobald das Geld im Kasten klingt, Die Seel’aus dem Fegfeuer springt" ("Raha vao mikarantsana ao amin' ny vata ny vola dia manidina avy ao amin' ny afo fandiovana ny fanahy"). Ny fanaovana endolzansy dia lasa hita ho endriky ny fahalovana nandritra ny taonjato faha-16.
Ny papa Leo X, sary nataon'i Raffaello Sanzio, taona 1518 - 1519.
Namely ny fototr' ilay fanao tao amin' ireo tsangan-keviny miisa 95 tao Wittenberg i Martin Lotera: araka ny filazany dia Andriamanitra irery no afaka manamarina ny mpanota. Notsikerainy miaraka ny endolzansy ho an' ny fanahy ao amin' ny afo fandiovana (tsangan-kevitra faha-8 hatramin' ny faha-29) sy ireo endolzansy ho an' ny velona (tsangan-kevitra faha-30 hatramin' ny faha-68). Ny amin' ilay tranga voalohany; ny maty amin' ny maha maty azy dia tsy voafehin' ny didy kanonika -- ka ny fisian' ny afo fandiovana mihitsy no toherina eto. Amin' io lohahevitra io, i Lotera dia nanohitra koa ny ady varotra atao ny amin' ny endolzansy sady niampanga ny Fiangonana ho nanararaotra ny fatahoran' ny vahoaka ny Afobe (Tsangan-kevitra faha-27). Amin' ny tranga faharoa, nanantitra i Lotera fa ny fibebehana ihany no ahazoana famelan-tsazy, fa tsy mila taratasin' endolzansy. Ny mifanohitra amin' izany no izy, araka an' i Lotera, satria manao izay tsy hahalalan' ny mpanota izay tokony hataony ny endolzansy, dia ny fiantrana sy ny fivalozana. Isan' ny antony nampisaraka ny Katolika sy ny Protestanta ny ady momba ny endolzansy.
Fanamafisan' ny Katolika ny fizarana endolzansyHanova
Nanamafy ny maha zava-dehibe ny endolzansy tamin' ny Konsily natao tao Tredentio (na Trenta) ny Fiangonana katolika mba hanoherana an' i Lotera.
Ny papa Klemento VIII
Noho izany dia nampahatsiahy i Leo X tao amin' ny fanamelohany an' i Lotera, ny tsy fitovian' ny famelana ny sazy voafetra sy ny tena famelana ny fahotana. Na dia izany aza dia maharitra hatramin' izao androntsika izao ny fanomezana endolzansy, ka manara-maso izany ny Kongregasionan' ny endolzansy izay natsangan' ny papa Klemento VIII (1592-1605) sady nakamban' i Klemento IX amin' ny Koria Romana tamin' ny taona 1669 -- ny fahefany dia nafindra tamin' ny Saint-Offce tamin' ny taona 1917 avy eo tamin' ny Pénitencerie apostolique, izay nisahana ny resaka endolzansy hatramin' ny nisiany.
Ny papa Klemento IX
Hatramin' izay ka hatramin' ny Konsily Vatikàna II, ny tahirinkevitra atao hoe paroasiana dia mbola ahitana fizaràna momba ny vavaka ao amin' ny toko natokana ho an' ny vavaka, fizaràna iray momba ny endolzansy. Ny Paroissien des fidèles dia mamoaka ny lisitry ny teny (invokasiona) atao amin' ny endolzansy: ny hoe "Jesoako, mamindra fo" na "Fon' i Jesoa miala aina, meteza ho malalako" izay mahasolo ny 100 andro tokony hanaovana fivalozana, fa ny hoe "Masindahy Josefa, mpiahy ny fahafatesana tsara, mivavaha ho anay" dia mahasolo 300 andro.
Ny endolzansy ankehitrinyHanova
Mitohy ny fanomezana endolzansy amin' izao andro izao, nefa notsorina ny fanaovana izany tamin' ny taona 1967, araka ny konstitosiona apostolika Indulgentiarum doctrina, nambaran' ny papa Paoly VI, izay nametra ireo antonantony hahazoana endolzansy, ka navela ilay fifandanjan' ny endolzansy amin' ny halavam-potoana.
Famaritana sy karazanaHanova
Izao no amaritan' ny kanona 992 ny indolzansa: "Ny endolzansy dia ny famelana eo anatrehan’ Andriamanitra ny sazy misy fetra vokatry ny fahotana izay efa voafafa ny fahadisoana, famelana izay azon’ ny mpino tsara toe-panahy araka ny fepetra maromaro voafaritra, amin’ ny alalan’ ny asan’ ny Fiangonana, izay amin’ ny maha-mpizarazara ny fanavotana azy, dia mizara sy mampihatra amin’ ny alalan’ ny fahefany ny raki-panoneran’ i Kristy sy ny olomasina". Izany famaritana izany dia nalaina ao amin' ny ensiklika Indulgentiarum doctrina nataon' ny papa Paoly VI ka naverina nadika ao amin' ny Katesizin' ny Fiangonana Katôlika ao amin' ny teboka faha-1471 izay arahim-panazavana.
Manavaka ny endolzansy manontolo (manafaka tanteraka ny tsanganasa fivalozana noho ny fahotana iray) sy ny indolzansa ampahany (tsy mahafaka ny tsanganasa fivalozana manontolo fa ampahany ihany) ny Fiangonana katolika, araka izao: "Ampahany na manontolo ny endolzansy, arakaraka ny anafahany ampahany na manontolo ny sazy misy fetra vokatry ny fahotana".
Amin' izao fotoana izao dia tsy ny mpitondra fiangonana ihany no afaka manome endolzansy: "Ny mpino rehetra dia afaka mahazo ny endolzansy ho an’ ny tenany ihany na manome izany ho an’ ireo nodimandry".
Ny fanao momba ny endolzansy ankehitrinyHanova
Ny papa Paoly VI (1897-1978)
Ny foto-pampianarana momba ny endolzansy dia nahitsin' ny Konsily Vatikàna II avy eo nahitsin' ny konstitosiona apostolika Indulgentiarum doctrina (tamin' ny 01 Janoary 1967) navoakan' ny papa Paoly VI, ka noraisina tao amin' ny Fehezan-dalana kanonika tamin' ny taona 1983. Ny fanao momba ny endolzansy dia nasian' ny konstitosiona apostolika Indulgentiarum doctrina fanovana, izay ilazan' ny papa Paoly VI fa "nisy fanararaotana tafiditra tamin' ny fanao momba ny endolzansy, na satria "tamin' ny alalan' ny endolzansy tsy voalanjalanja sy maro loatra" dia nihena ny lanjan' ireo fanalahidin' ny Fiangonana ary nihena hery ny fahafaham-po momba ny fivalozana, na satria notetenin-dratsy noho ny "tombontsoa medri-panamelohana" ny anaran' ireo endolzansy.
Ao amin' ny Katesizin' ny Fiangonana Katôlika tamin' ny taona 1992 (§ 1471-1479), ny Fiangonana dia manamafy indray fa ny zony hanome endolzansy, "noho ny fahefana mamehy sy mamaha nomen' i Kristy Jesoa azy" azy (§ 1478). Nambarany mazava fa ny "sazy misy fetra" ihany no afahan' ny endolzansy fa tsy ny "sazy mandrakizay" -- izany hoe ny tsy fanomezana ny "fiainana mandrakizay", ny tsy fananana ny fiombonana amin' Andriamanitra. Nampahatsiahiviny indray fa ny endolzansy dia omena ny mpanota tsy noho ny fivalozany ihany fa noho ny fiombonan' ny olo-masina.
Sary famantaran' ny Katesizin'n y Fiangonana Katôlika
Raha tsy hita matetika ny fanomezana endolzansy raha ampitahaina amin' ny vaninandro lasa, dia mazava fa mbola misy izany: ohatra ny Katesizin'ny Fiangonana katôlika dia manafatra hatrany, miaraka amin' ny fiantrana sy ny tsanganasa fivalozana, ny fampiasana ny endolzansy ho an' ny maty (§ 1032). Ny endolzansy lehibe dia omena amin' ny jobily, izay maha "singa mandrafitra" azy, araka an' i Joany-Paoly II (taratsy fanambaràna Incarnationis mysterium, § 9.1). Tamin' ny jobilin' ny taona 2000 ny Fivalozana apostolika no nihevitra fa tsara ny hampatsiahivana ireo fepetra ahazoana ny endolzansy. Amin' ny tranga rehetra, endolzansy manontolo na endolzansy ampahany --, ny mpino dia tokony ho tsy nanao fahotana mahafaty.
Mba hahazoana endolzansy manontolo izay tsy azo afa-tsy indray mandeha isan'andro, afa-tsy amin' ny olona ambavahaonan' ny fahafatesana, dia izao no tokony hataon' ny olona mangataka izany:
maniry hahazo endolzansy;
afaka tanteraka amin' ny fahotana, na dia fahotana maivana aza;
mikonfesy ao anatin' ny roapolo andro eo ho eo aloha na aorian' ny fanomezana ny endolzansy;
mandray ny eokaristia ao anaty roapolo andro, aloha na aorian' ny fanomezana ny endolzansy;
mivavaka araka ny fikendrena atoron' ny papa na mivavaka ho an' ny papa;
manatanteraka ny asa iraiketan' ny endolzansy ao anatin' ny taona voafaritra (raha mifamatotra amin' ny andro iray ny endolzansy na amin' ny fe-potoana manokana).
Raha amin' ny ampahany ihany no nanatanterahana ireo zavatra ireo na raha tsy vonona ny amin' izany ny fon' ilay mpino, ny endolzansy dia ampahany. Ampahatsiahiviny koa fa ny endolzansy dia tsy afa-mihatra afa-tsy amin' ny tena na amin' ireo "fanahy ao amin' ny afo fandiovana", fa tsy amin' ny olona hafa izay mbola velona.
Ny vokatry ny endolzansyHanova
Araka ny foto-pampianarana katolika, ny fahotana dia voafafan' ny sakramentan' ny famelan-keloka (ny konfesiona). Io sakramenta io anefa tsy manaisotra ny sazy voafetra vokatry ny fahotana, izay mifandanja amin' ny fotoana tokony ho lanina ao amin' ny afo fandiovana raha tsy diovina ety an-tany amin'ny alalan' ny asa maneho fitiavam-bavaka sy fiantrana (asa fanonerana). Izany sazy voafetra ara-potoana izany dia mety hamaivanina na fafana tanteraka amin' ny alalan' ny endolzansy. Ny endolzansy dia atao hoe ampahany na manontolo, arakaraky ny fanafahany amin' ny ampahany na manontolo ny sazy vofetram-potoana vokatry ny fahotana.
Ny papa Pio IX
Ny endolzansy ampahany dia isaina amin' ny andro na volana na taona. Izany faharetana izany dia tsy noheverina ho mifanandrify amin' ny famelana mivantana (amin'ny isan' ny andro na volana na taona) ny tokony hitoerana ao amin' ny afo fandiovana mifandanja amin' izany. Ny endolzansy dia manondro fotsiny ny famelana sazy tokony hitovy sanda amin' ny faharetana mifandanja amin' ny fivalozana vitaina araka ny lalànan' ireo kanona voalohan' ny Fiangonana. Izany faharetana izany koa dia ahafahana mitarika ny fanehoam-pitiavam-bavaka ataon' ny vahoaka, araka ny haben' ny fankatoavana omen' ny fahefam-piangonana ilay faharetana. Ohatra, ny papa Pio IX dia nanome endolzansy nanomboka tamin' ny taona 1847 amin' ny vavaka atao amin' ny Notre-Dame de La Salette, mba hanamarihana amin' ny hafanam-pony ny faniriany ny hanekena amin' ny fomba ofisialy ilay fisehoan'i Maria. Ny papa nifandimby dia nanome endolzansy maro mba hitarihana ny fitiavam-bavaka ka vokatr' izany dia nisy ny toy ny fitosahana be loatra, sahala amin' ireo vavaka fohy ahazoana endolzansy izay indraindray be sanda. Tamin' ny taona 1967, tamin' ny Konsily Vatikàna II, no nanafoanan' ny papa Paoly VI ny fampifandraisana amin' ny isan'ny andro na taona voafaritra: hatramin' izany dia tsy misy afa-tsy endolzansy ampahany na endolzansy manontolo.
Ny endolzansy ampahany dia mety homen' ny fahefan' ny eveka, raha fahefan' ny sampam-pitsarana atao hoe Pénitencerie apostolique ny endolzansy manontolo.
↑ Ny simonia dia fividianana fanaka ara-panahy, sakramenta, andraikitra ao amin'ny fitanantanam-piangonana
↑ Ny Reconquista dia ilay fotoana tamin'ny Andro Antenantenany izay nisian'ny famerenan'ireo fanjakana kristiana ny tany ao amin'ny saikanosy Iberika sy ny nosy Baleara izay nalain'ny Miozolmana.
↑ Ny antipapa dia olona nilaza ny tenany ho papa nefa tsy eken'ny Fiangonana katolika ho papa tokoa ankehitriny. Marihina fa nisy papa atao hoe Joany XXIII koa izay papa ara-dalàna eken'ny Katolika.
↑ 4,0 4,1 et 4,2 Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, Katesizin'ny Fiangonana Katôlika, dikan-teny manontolo, 2009, p. 414.
↑ I Notre-Dame de La Salette dia tsy izay fa i Maria renin'i Jesoa izany, tamin'ny filazana azy fa niseho tamin'ny ankizy roa tamin'ny 19 Septambra 1846 tao amin'ny tananan'i La Salette-Fallavaux any Frantsa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Endolzansy&oldid=976559"
Dernière modification le 5 Novambra 2019, à 07:53
Voaova farany tamin'ny 5 Novambra 2019 amin'ny 07:53 ity pejy ity.